Numanthia Tempranillo 2011 ~ ICT.com.mm
HomeNumanthia Tempranillo 2011
Numanthia Tempranillo 2011
Numanthia Tempranillo Alcohol: 15% Dry/ 2011 Toro/ Spain Tasting Notes An intense, robust and vivacious wine. Dark and stormy color with intense aromas of black fruit and berries, hints of black pepper... [Learn more]
Brand: NumanthiaFilter by: FMW, Wine
An intense, robust and vivacious wine. Dark and stormy color with intense aromas of black fruit and berries, hints of black pepper and clove. A long and persistent finish with complexity and handcrafted character will be presented in this wine.
Ideal with roast veal or lamb and other red meat on strong flavor sauces. Its delicate nature marries particularly well with light game dishes, such as partridge or roast pigeon.
စပိန်နိုင်ငံထုတ် Numanthia Tempranillo 2011 ဝိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ အနီရောင်ဝိုင်ထွက်ရှိရာဒေသအဖြစ် နာမည်ကျော်ကြားလာတဲ့ စပိန်နိုင်ငံ၊ အနောက်မြောက်ပိုင်း Toro ဒေသမှာရှိတဲ့ Bodega Numanthia ဝိုင်လုပ်ငန်းကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ စပိန်နဲ့ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံရှိ အကောင်းဆုံးဝိုင်တွေကို ထုတ်လုပ်ရာမှာ အဓိကအသုံးပြုတဲ့ Tempranillo အနီရောင်စပျစ်မျိုးကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှု (၁၅) ရာခိုင်နှုန်း ရှိတဲ့ Dry/ 2011 ဝိုင်နီ(Rich & Intense) အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ မွှေးပျံ့တဲ့ဆော့စ်တွေနဲ့တွဲစားရတဲ့ နွားကလေးသားကင်၊ သိုးကလေးသားကင် တို့အပြင် အခြားသော အနီရောင်အသားဟင်းလျာတွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ စပိန်ဝိုင်နီ ဖြစ်ပါတယ်။ ခါငှက်နဲ့ ခိုငှက်ကင်တို့လို ဟင်းလျာတွေနဲ့လည်း တွဲဖက်ဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။